War murtiyeed ka soo baxay shirkii Golaha Amniga Qaranka oo ka dhacay Mogadishu… – Hagaag.com
War murtiyeed ka soo baxay shirkii Golaha Amniga Qaranka oo ka dhacay Mogadishu…
Posted on 11 Febraayo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Golaha Amniga Qaranka ayaa kulankoodii Lixaad ku yeeshay magaalada Muqdisho, 6-10 Feebaraayo 2018. Shirkaas oo ka dhacay xarunta Maaxtooyada – Villa Somalia ee magaalada Muqdisho.
Shirka wuxuu soo dhaweeyey Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Benaadir oo ah kulankii ugu horreeyey.
Shirkan wuxuu dabasocday shirarkii joogtada ahaa ee Golaha Amniga Qaranka yeelan jiray. Goluhu wuxuu bogaadinayaa booqashada taariikhiga ahayd ee uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku maray Gobollada dalka, gaar ahaan deegannada Puntland iyo Galmudug.
Guddiga Farsamada ee Amniga Qaranka oo ka kooban heer Federaal iyo mid Gobol, waxaa la go’aamiyey in ay kulmaan saddexdii asbuucba hal mar, waxayna xog dhammeystiran la wadaagayaan Madaxweynaha JFS iyo Madaxdooda.
Waxay Xukuumadda Federaalka soo bandhigtay qorshaha Tubta Siyaasadda ee loo dhanyahay ee 2020-ka, taasoo dood iyo falanqayn dheer kadib la isla gartay in ay fulinteeda kawada qayb qaataan Dawladda Federaalka iyo Dawladaha Xubnaha ka ah iyo Gobolka Benaadir.
Madaxda qaranku waxay isku raaceen in shirka soo socda lagu qabto magaalada Baydhabo 28-ka bisha Maarso 2018 loogana heshiiyo qaybsiga khayraadka oo dhammaystiran, iyo hannaanka doorasho ee uu dalku qaadanayo sannadka 2020-ka. Madaxda qaranku waxaa kale oo ay isku raaceen in la dardar geliyo go’aan ka gaarista arrimaha masiiriga ah ee horyaalla sida, awood qaybsiga, hannaanka garsoorka federaaliga ah, midaynta hannaanka dakhliga, nidaamka dawladeed ee dalku yeelanayo iyo maqaamka caasimadda Muqdisho.